Cuntada caadiga ah ee Veracruz, isku-darka autochthonous ee Hispanic | Wararka Safarka
Cuntada caadiga ah ee Veracruz
Luis Martinez | 24/05/2021 13:15 | Gastronomy, Mexico
Cuntada caadiga ah ee Veracruz waxay leedahay saldhig muhiim ah wax soo saarka badda. Maaha wax aan micno lahayn, gobolkani wuxuu ku yaal Gacanka Mexico, mana aha oo keliya xeelal badan oo kiilomitir ah, laakiin sidoo kale magaalada magaceeda siisa waxay leedahay dekedda ugu muhiimsan dalka.
Veracruz sidoo kale waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee Isbaanishku ka aasaaso Mexico. Sidaa darteed, ka Qaybta Isbaanishka waxay aad ugu jirtaa caloosha. Tan waxaa lagu darayaa kan dhaqankii Mesoamerican ka hor Columbian-ka iyo cunsuriyada afrikaanka iyo cunnooyinka Kaaribibiyada inay soo saarto calool-xanuun sida xoog leh maadaama ay u macaan tahay dhanka dhadhanka. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato cuntooyinka caadiga ah ee Veracruz, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Cuntada caadiga ah ee Veracruz: Waxoogaa taariikhi ah
2 Cuntada caadiga ah ee Veracruz: Suxuunta ugu caansan
2.1 Kalluunka qaabka Veracruz
2.2 Arroz a la tumbada, oo ah macaan kale oo ka mid ah cuntada caadiga ah ee Veracruz
2.3 Shiidan ama qanjaruufo
2.4 Zacahuil ama Sacahuil
2.5 Cars chilpachole
Cuntada caadiga ah ee Veracruz: Waxoogaa taariikhi ah
Wax kasta oo aan kuu sheegnay ee ku saabsan Veracruz gastronomy waa la hodmiyey, markiisaba, badeecooyinka ka soo baxa dhulalka gobolka, aad u bacrin badan oo kala duwanaansho weyn leh iyada oo ay ugu wacan tahay cimilada kulaylaha iyo kuleylka ah ee ay leedahay.
Laakiin waxa ugu horeeya ee aan dooneyno inaan kuu sheegno waa taariikh yar oo ku saabsan cuntada caadiga ah ee Veracruz. Isbaanishku wuxuu ka keenay badeecooyin badan cuntadooda. Iyaga ka mid ah, digir, bariis, qamadi iyo liin dhanaan. Laakiin sidoo kale hilibka sida kan doofaarka ama kan ah digaag iyo jawharado isaga la mid ah saliida saytuunka iyo toonta.
Markii lagu aasaasay dhulalka Veracruz, deganayaasha cusub waxay bilaabeen inay soo saaraan alaabo kale, qaar horeyba dhaqan ahaan ugu jiray cunnadii ka hor-Columbian, halka kuwa kalena caan ka ahaayeen. Waxaa ka mid ahaa galley, kafeega iyo miraha sida cananaaska, qumbaha, sapote, cambe, guava ama liinta.
Horeba qarnigii XNUMXaad, soogalooti cusub ayaa ka yimid meelo kala duwan oo adduunka ah kuwaas oo ku qanciyay caloosha Veracruz caadooyin carab, caribbean kana imanaya Wadamada yurub. Waxaas oo dhami waxay dhaliyeen saddex nooc cunnada sida caadiga ah ee gobolkaan Mexico ah. Aan aragno iyaga.
Cunnooyinka loo yaqaan 'Creole' oo leh saameyn Afrikaan Mareykan ah. Sida magaceedaba ka muuqata, waxay isku darsataa Isbaanishka, cunnooyinka cunnooyinka dhaladka ah iyo kuwa Afrika. Waxay u badan tahay, kana mid ah waxyaabaha caadiga ah ee ay isticmaasho, waa kasaafada, oo Isbaanishku ugu yeero yams si sax ah sababta oo ah waxay la mid tahay tuberkan Afrikaanka ah; hadhuudhka; sonkorta ama xawaashka sida ubaica Jamaica iyo tamarind.
Cunnada Huasteca. Waxay ku saleysan tahay dhaqankii magaalada teenek, oo ku taal qaybta woqooyi ee Veracruz. Halyeeyadeeda runta ah waa hadhuudh noocyo kala duwan ah sida caddaan, guduud ama casaan. Waxaa ka mid ah cuntooyinka caadiga ah zacahuill, tamale ama cajiinka, oo si sax ah looga sameeyay hadhuudh, kaas oo ka buuxa hilibka xayawaanka kala duwan; ah mole de nopales iyo maraq huasteco.
Cunnada Totonac. Si isku mid ah woqooyiga, waxay ku saleysan tahay hadhuudhka laftiisa, basbaaska basbaaska iyo digirta. Waxaa ka mid ah cuntooyinkeeda caadiga ah noocyo kala duwan oo ah atoles (cabitaanno hadhuudh ku saleysan waqtiyadii kahor Hispanic) iyo tamale.
Cuntada caadiga ah ee Veracruz: Suxuunta ugu caansan
Sidaan dhahnay, cuntada caadiga ah ee Veracruz waxay leedahay saldhig muhiim ah kalluunka iyo cunnada badda, laakiin sidoo kale waxaa ku jira macaan suugada lagu sameeyay alaabada wadaniga ah. Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah suxuunadan.
Kalluunka qaabka Veracruz
Cuntadani waxay si sax ah isugu daraysaa labada shay: midhaha badda iyo kuwa dhulka Veracruz. Waxaa lagu samayn karaa kalluun kasta oo aagga ku yaal, laga bilaabo dogfish ilaa cabrilla iyada oo loo marayo snook, tilapia iyo basal. Si kastaba ha noqotee, sida ugu badan loo isticmaalo waa snapper cas, looga yaqaan gobolka sida snapper cas, kalluun xayawaan aad u macaan
Si kastaba ha noqotee, sirta cuntadan caadiga ah waxay ku jirtaa suugada, taas oo, xiiso leh, waa mid ka mid ah kuwa yar ee lagu sameeyay Mexico taas ma cuncun. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa saliid saytuun ah, caleen caleen, milix iyo basbaas, basal, yaanyo, dhir, toon, ugdoon, saytuun iyo koofiyad.
Diyaargarowgeeda waa wax iska fudud, maxaa yeelay, marka maraqa la helo, waxaa lagu sameeyaa kalluunka foornada ku jira. Si sax ah u siinta taabasho basbaas leh, waa lagu dari karaa cuaresmeño chili waxaana loogu adeegay bariis cad ama baradho. Shaki la'aan, waa yaab gastronomic.
Arroz a la tumbada, oo ah macaan kale oo ka mid ah cuntada caadiga ah ee Veracruz
Arroz a la tumbada, mid ka mid ah quutal daruuriga ku jira cuntada caadiga ah ee Veracruz
Waxaan dhihi karnaa waxay u dhigantaa cuntada badda ee Paella, inkasta oo ay leedahay waxyaabo u gaar ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay, marka lagu daro bariiska, waa haley, carsaanyo, clams iyo waxsoosaar kale oo badeed kuwaas oo sofrito oo lagu sameeyay toon, basal, yaanyo iyo basbaas cas. Ugu dambeyntiina, dhadhankeeda waxaa lagu xoojiyay caleemaha dhirta, oregano, koryander iyo epazote.
Waxay umuuqataa in asalka saxankan ay tahay in laga raadsado cuntada kaluumeysatada kuwaas oo, qarnigii XNUMX-aad, shaqadooda ka qabtay xeebaha Veracruz. Iyo, sida xiisaha leh, waxaan kuu sheegi doonaa in loogu yeeray «jiifsiga» si loo muujiyo inay diyaar tahay maraq leh.
Shiidan ama qanjaruufo
Aad looga jecel yahay bartamaha gobolka, iyagu maahan wax kale oo aan ahayn kalluunka hadhuudhka leh salsa dusha sare oo lagu qurxiyay jiis ranchero iyo basal. Waxay helaan magaca qanjaruufo, si hufan, maxaa yeelay cidhifyada keega ayaa la jiiday si aysan suxuhu u dhicin.
Waxay u egyihiin sopes Waxaa lagu sameeyaa waddanka intiisa kale, haddii aad rabto inaad haysato wax caadi ah oo lagu cuno Veracruz, waanu kula talinaynaa iyaga maxaa yeelay waa macaan yihiin. Si kastaba ha noqotee, dadka asal ahaan ka soo jeeda gobolka ayaa sida caadiga ah u qaata sidii Desayuno.
Zacahuil ama Sacahuil
El Tamale Aad ayey caan u tahay, kaliya maahan Veracruz, laakiin sidoo kale Mexico oo dhan. Sidaad ogtahay, waa hadhuudh la kariyey oo ku duudduuban caleentiisa. Si kastaba ha noqotee, zacahuil waa natiijada cunnada Huasteca, sidaan horeyba kuugu sheegnay.
Waa hubaal a Ramale tamale, laga yaabee kan ugu weyn ee aad ka heli karto waddanka oo dhan. Laakiin waxay leedahay taariikh badan. Cajiinka galleyda waxaa lagu diyaariyey cuntadan sida dadka wadanku u sameeyeen boqollaal sano ka hor. Sidaa awgeed, waxay soo saartaa tiro la yiraahdo nixtamal taas oo badarka ay ka yar tahay dhulka iyo muuqaal dillaac badan.
Cajiimadan ayaa laga buuxiyey xayrta doofaarka, basbaaska chili iyo doofaarka ama hilibka turkey, iyo waxyaabo kale. Dambe waa shimbir ballaaran oo u dhalatay Mareykanka oo leh muuqaal u eg turkey.
Cuntada caadiga ah ee Veracruz sidoo kale waxaa ku jira maraq aad u dhadhan fiican iyo buuxin. Waa kiiska chilpachole, oo asalkoodu yahay loo aaneeyo cunnada Faransiiska. Sababta oo ah kuma saabsan wax aan ka ahayn hal maraq cunto Lagu sameeyay kalluun iyo carsaanyo (carsaanyo buluug ah oo caadi ah oo ka soo jeeda xeebaha Veracruz).
Si kastaba ha noqotee, chilpachole wuxuu aad uga xoog badan yahay maraq dhaqameedka dhaqanka. Bilowga, waxaa la siiyaa joogteyn leh cajiinka galleyda. Iyo, marka lagu daro, waxay leedahay basal, basbaas la qalajiyey, yaanyo, toon iyo epazote. Dhammaan maaddooyinkaasi waxay siiyaan wax la mid ah atole, cabitaan asal ahaan ka soo jeeda Isbaanishka oo aan horay u soo sheegnay, in kasta oo taasi dhaqan ahaan ay macaan tahay.
Laydhku waa Maraq ubax Izote. Saldhigeedu waa warshaddan asalka ah ee Bartamaha Ameerika sidoo kale waxay sida caadiga ah qaadataa haley, chives, yaanyo, epazote iyo dhegaha dhuumaha. Dhanka kale, kuwani waa baastada lagu sameeyo abuurka bocorka oo sidoo kale loo isticmaalo suxuunta kale.
Moogo moogo, oo ah macaan kale oo ka mid ah cuntada caadiga ah ee Veracruz
Dhamaan cuntooyinka caadiga ah ee Veracruz, tani waxay u badan tahay inay tahay midda ugu cad Xididdada Afrika. Sababta oo ah, sidoo kale loo yaqaan machuco, waa wax kale oo aan ahayn plantain cagaaran oo shiidan.
Si loo sameeyo, kuwan maqaarkooda waxaa lagu kariyaa biyo karkaraya. Markuu dillaacoodu dillaaco, waa la soo saaraa oo subag iyo milix ayaa lagu daraa si loo burburiyo ilaa ay ka helayaan qaab sax ah. Laakiin saxankan weli diyaar ma ahan. Milixda ayaa loo daayaa inay ku qaboojiso qaboojiyaha si ay u adkaato ka dibna qoto dheer u shiil. Badanaa, waxaa loo adeegi doonaa dhinac ahaan digirta.
Haddii suxuunta aan soo sheegnay ilaa hadda ay yihiin kuwo macaan, macmacaanka Veracruz kama fog yihiin. Ku dhowaad dhammaan cuntadiisa waxay ku saleysan yihiin sarreen iyo, ka mid ah macmacaanka ugu xiisaha badan, waxaan ka xusi doonaa chogostas, kubadaha qaar oo leh dhoobo la cuni karo oo asalkoodu soo bilaabmay waqtiyadii ka hor Hispanic-ka.
Dhaqan badan ayaa ah duchesses, Nooc tacos ah oo laga buuxiyey meringue qumbaha, iyo masafin, qaar polvorones ah oo lagu daboolay sonkor iyo qorfe. Dhiniciisa, tetamal Waa cajiinka galleyda iyo sonkorta ah ee lagu shiiday anis waxaana loogu adeegaa kuleyl waxaana lagu duuduubay caleen berijao ah.
La bocorka Isagu waa halyeeyga dhowr macmacaan oo Veracruz ah. Waa kiiska friters, in kastoo, marka loo eego kuwan, ka hunguriga, kuwaas oo ay ka buuxaan meeris. Ugu dambeyntii, ka pemoles waa galley, subag iyo donuts sonkor iyo marzipan ka Veracruz Waxaa lagu gartaa leh looska halkii yicib.
Torito ayaa la baakadeeyay
Horay ayaan kaaga soo sheegnay atole, oo lagu sameeyo dhadhan kala duwan iyadoo kuxiran miraha lagu diyaariyo. Marka, waxaan ka hadli karnaa atole ka mid ah muuska, bocorka, galleyda ama coyol (miro la mid ah qumbaha). Waxaa sidoo kale lagu wada baabbi'iyey Veracruz the horchata, inkasta oo aan loo samayn sidii Spain. Halkaas waxaa lagu sameeyaa bariis iyo qorfe ama vanilj.
Caadi ahaan wali waa cabitaanno sida menyul, lagu sameeyay reexaanta, iyo furo. Midda dambe waxay noqon doontaa macaan, maadaama ay leedahay kookaha, bariiska, qorfaha iyo miraha sida azquiote. Ugu dambeyntii, ka digaagga Waa is biirsaday aalkolo leh oo ay ka kooban tahay bucshirad caano ah, caano isku darsan iyo subagga looska, in kasta oo sidoo kale lagu sameeyo dhadhanno kale sida cambe.
Gabagabadii, waanu kuu sheegnay waxa ku saabsan cuntada caadiga ah ee Veracruz. Sida aad arki doonto, waxaa ku jira suxuunta noocyadeeda kala duwan, kuwaas oo ka macaan badan. Laakiin Veracruz kaliya uma taagna gaaskeeda, waxay mudan tahay booqashada, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sidoo kale sahamiso waxa lagu booqanayo Veracruz. Haddii aadan ku dhiiran karin inaad sameyso xaddidaadda cudurrada faafa awgeed, halkan waxaa ku yaal maqaal ku saabsan shuruudaha safarka wadamada sidaa darteed waxaad sameyn kartaa cabsi la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Cuntada caadiga ah ee Veracruz
Meesha la aado bisha Maajo: 10 meelaha ugu wanaagsan